Home News Waa imisa tirada Shabaabkii Danad ay ka qabteen Deegaanka Toora tooroow
Waa imisa tirada Shabaabkii Danad ay ka qabteen Deegaanka Toora tooroow
Xubno ka tirsan Ururka Al Shabaab oo lagu qabtay deegaanka Toora Toorow ee Gobolka Shabellaha Hoose ayaa waxaa la keenay Magaalada Muqdisho.
Ciidanka Kumaandooska Danab ee ka tirsan Xoogga Dalka ayaa Isniintii shalay bilaa dagaal kula wareegay gacan ku haynta Toora Toorow, waxaana u suurta-gashay inay gacanta ku soo dhigaan toban xubnood oo Shabaab ka tirsan, kuwaa oo laba ka mida ay Saraakiil yihiin.
Ismaaciil Mukhtaar Cumar (Oronjo), Afhayeenka Wasaaradda Warfaafinta ayaa xaqiijiyay in Magaalada Muqdisho la keenay tobankii xubnood ee lagu qabtay deegaanka Toora Toorow.
Afhayeenka ayaa sharaxaad ka bixiyay waxa ay isugu jiraan xubnaha lagu qabtay hawlgalkii Toora Toorow, isagoona cadeeyay in laba ka mida ay horjoogayaal yihiin.
“Ciidanka Danab oo hawlgal qorsheysan ku qaaday Toora Toorow ayaa waxaa u suurta-gashay inay gacanta ku soo dhigaan Madaxii Garsoorka ee Maxkamadda Al Shabaab ee Toora toorow, Macalin Abuukar iyo Madaxii Zakaawaat-ka ee Al Shabaab. Waxaana lala soo qabtay sideed kale oo ka tirsan argagixisada Al Shabaab.” Ayuu yiri Afhayeenka oo la hadlay Warbaahinta gudaha.
Ismaaciil Oranjo ayaa sheegay in deegaanka Toora Toorow uu ahaa mid ay Shabaabka ku dhibaateen jireen shacabka Soomaaliyeed, sidoo kalena ay qaraxyada ka soo abaabuli jireen, sida uu yiri.
Al Shabaab ayaan ka hadlin gulufka ciidan ee looga kiciyay deegaanka Toora Toorow oo muddo dheer, ay ka arrimineysay.